Iimephu zikaGoogle zandisa inkqubo yeeKhokelo zaseKhaya ngohlaziyo lwevidiyo | Iindaba zeGajethi
Kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo uGoogle wahlaziya inkonzo yeemephu zikaGoogle ezibizwa ngokuba ziiNdawo zaseKhaya, ukuvumela layisha kwakhona iividiyo kwiqonga. Le nkqubo ivumela abasebenzisi ukuba baveze uluvo lwabo malunga neendawo abazindwendwelayo, kwaye kubandakanya iifoto kunye nokusebenzisana ngokuphendula imibuzo eyahlukeneyo malunga nokusekwa. Ngaphandle kokubandakanya olu khetho, kumazwe ambalwa ngokukodwa, inkampani ibingakhange ibhengeze ngokusesikweni, njengoko ibingasebenzi. Kodwa kangangeentsuku ezimbalwa, uGoogle usebenze le nkonzo kumazwe amaninzi kwaye uthumela ii-imeyile kubo bonke abo bantu bayinxalenye yoluntu abasebenza ngokubambisana neemephu zikaGoogle ngenkqubo yeeKhokelo zaseKhaya.
Ndiyabulela kule nto intsha, uGoogle uvumela iZikhokelo zaseKhaya layisha iividiyo ukuya kuthi ga kwimizuzwana engama-30 eqongeni, iividiyo apho sinokunika uluvo lwethu kunye nembono malunga nokusekwa okanye indawo esikuyo, eya kuthi ivumele abasebenzisi ukuba bafumane umbono ongcono wesiseko ngokwaso, ngaphandle kokuthintela uluvo lwabo kwezinye iifoto ezingasivumeli ukuba zifumanise ngokwethu kwaye singazi ulwazi malunga nalo.
Kodwa ayisibaBonisi baseKhaya kuphela abanokufaka iividiyo kuleqonga ekunokuboniswana ngazo neeMaphu zikaGoogle, kodwa zikwanjalo abanini abanokufaka iividiyo zesiko apho banikezela khona iinkonzo abazinikelayo, ngale ndlela siyakukwazi ukufumana ulwazi oluninzi ngexa elincinci, ulwazi oluya kusinceda ukuba sikhawuleze sifumane umbono wokuba injani.
Ukusuka kwisicelo seMaphu zikaGoogle sinokurekhoda ngokuthe ngqo iividiyo ezifakwe ngokuzenzekelayo eqongeni, kodwa Banqunyelwe kwimizuzwana eli-10. Ukuba sifuna ukwandisa inani lemizuzwana ukuya kuma-30, kuya kufuneka siyinyuse ividiyo kwi-smartphone yethu, kuba ukusuka kwisondo sinokuyilayisha eqongeni ngaphandle kweengxaki, sitsibe isithintelo sesibini semizuzu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » Iimephu zikaGoogle zandisa inkqubo yeeKhokelo zaseKhaya ngohlaziyo lwevidiyo